16 Qodob oo muhiim ah in sax lasaaro inta aadan bilaabin ganacsi | Suubbis Blog
Ma waxaad u baahan tahay inaad aasaastid ganacsi? Hambalyo! Waxaad kasoo gudubtay tillaabada koowaad ee fikir abuurmidda. Waxaad soo gaartay xilligi aad diyaarin laheyd qaababki aad ku aas aasi laheyd ganacsi laakin marka hore waxaan ku leeyahay waxaa soo badanayaa dadka doonaya iney yagleelaan ganacsi, waxaa sidoo kale idlaaday waayihi la aasaasi jiray ganacsi aan aqoon loo laheyn oo aan loo diyaar garoobin. Suuqi wuxuu noqday mid la isku fara saaro oo aqoon iyo xeelad laisku adeegsado, waxaa kor u kacaya baahida loo qabo in ogaal loo lahaado tillaaboyinka ka horeeya xiliga ganacsiga uu sameyn karo macaash.
Waxaa laga yaabaa iney kaa tan badiso waxyaabaha kuugu jira jadwalka oo lagaa rabo inaad qabatid, waxaan ku leeyahay haka walwalin. Waxaan halkaan kuugu soo gudbinayaa qodobada ugu muhiimsan ee lagaa rabo inaad sax saartid inta aadan billaabin ganacsiga kahor.
Maxaa lagaa rabaa inaad sameyso si aad u abuurto ganacsi?
Shaqooyinka hoos ku qoran waa kuwo muhiim ah inaad sida ugu dhaqsiyaha badan u sameysid hadii aad mar go’aan ka gaartay ganacsiga aad rabtid inaad abuurtid;
Go’aami in ganacsiga uu yahay mid meel mari karo
Waxaad u baahan tahay inaad khiyaali meel iska dhigto, waxaad u baahan tahay inaad naftaada si dhab ah oo daacadnimo ay ku dheehan tahay xaqiiqda ugu sheegtid. Ganacsigaaga waxaa laga rabaa inuu noqdo mid faa’ido laga helo ama leh wax soo saarkii oo u qalmay. Waxaad isweydiisaa adiga waxa aad rabtid inaad aasaastid mayihiin wax aad adiga naftaada gadan laheyd? Ka fikir macaamiisha madhiibi karaan qarashka aad u baahan tahay si aadan ugu dhicin khasaaro?
Samee qorshe ganacsi
Aad ayey ufududdahay inaad isku qanciso inaadan u baahneyn qorshe ganacsi, laakin sameynta qorshe ganacsi oo ay lasocoto saadaalin maaliyadeed waxey kuugu qasbeysaa inaad waxwalbo si qoto dheer uga fikirtid. Qorshaha ganacsiga waa mid marwalba aad uu bahan karto inaad u jaleecato si aad isu xusuusid jihada iyo meesha aad wax marsiineyso
Ganacsiyada cusub waxey guusha ku qaadata muddo ka dheer inta aad adiga u maleysid hadda. Sidaa darteed waa muhiim inaad marka hore garato halka uu dakhliga ugu horeeyo kaa soo galaayo. Hadii aad u baahan tahay maal-gelin waxaa isla hadaba ku dhaqaaqdaa helitaanka wadooyinka aad ku heli kartid maal gelinta, sidoo kale waa muhiim inaad dejisid qaabka aad usoo celin kartid maal-gelinta iyo xilliga aad rajeyn kartid inaad bilowdid soosaaritaanka faa’idada
Soo jiido qoyskaaga
Waxaad juhdi iyo waqti kubixisaa si aad u xaqiijisid in qoyskaaga ay aaminaan qorshahaaga ganacsi, siiba lamaanahaaga, waa muhiim inaad la tashatid oo aad iyagana weydiisid iney fikirkaaga turxaan bixiyaan si ay fikradda ula dhacaan ama ay meel aadan wax ka arkeynin ay kaaga tusaan.
Udoor ganacsigaaga magac
Waxaad u baahan tahay inaad ubixisid magac si fudud ugu dhegaayo maanka bulshada iyo macaamiisha aad bar tilmaameedsaneyso. Waana muhiim inuusan noqon magac horay loo qaatay. Si aad u xaqiijisid magaca aad rabtid ka baar baraha wax baara sida Google ka, si aad u ogaatid magaca aad rabtid in horay loo qaatay oo uu kasoo dhex muuqdo internetka iyo in kale. Tillaabada xigta waxey noqoneysaa in magaca aad ubixin rabtid ganacsigaaga inaad u kuur gasho in wasaaradda ganacsiga horay looga diiwaan geliyay iyo in kale, ogoow hadii magacaas horay loo qaatay waxaa waajib kugu noqoneyso inaad magac kale u raadisid ganacsiga aad rabtid inaad bilowdid.
Internetka ka diiwaan geli magacaaga si aad internetka uga soo dhex muuqadatid
Magacaaga ka diiwaan geli internetka, si aad mustaqbalka ugu dhibtoonin, hadii aad isticmaashid websiteyada bilaashka ah sida magaca.wordpress.com ama email address yada ku dhamaada @gmail.com waxey kaa dhigayaan qof u muuqda (b) inaadan laheyn ganacsi dhab ah (t) inaadan aheyn qof raja kaleh inuu ganacsigaas kusii jiri doono. Sidaa darteed waa muhiim inaad ganacsigaaga magaciisa aad domain ahaan usii diiwaan gelisid, waxaa jira noocyo kala duwan oo domain no kala duwan sida .COM, .NET, .ORG, INFO, .SO, .COM.SO, NET.SO iyo kuwa kale oo badan. Halkaan ka akhriso 5 sababood oo aad ugu baahan tahay inaad si degdeg ah u qabsatid domainka dotSo.
Aqoon u yeelo qaab dhismeedka sharciga ee ganacsiga
Inaad aqoon buuxdo u yeelatid sharciyada kala duwan ee xakameeyo ganacsiyada waxey kuu ilaa lineysaa hantida gancsigaaga iyo shatiyada aad ku heli kartid ganacsigaaga
Codso shatiga ganacsigaaga
Waxaa suurta gal ah iney kuugu waajibeyso hal shati ama kabadan si aad ugu rumeysid riyada ganacsigaaga, waxeyna ku xiran tahay hadba dhanka aad ganacsiga kasameyneysid. Shatiyada inta badan waxey ukala baxaan kuwo dowladda dhexe ay bixiyo iyo kuwo gobolka uu bixiyo.
Bartaada internetka ukici sida ugu dhaqsiyaha badan. Waayaha aan joogno websiteka wuxuu noqday aasaaska sumcadda ganacsiga. Waa fikrad wanaagsan inaad sii hagaajisato websiteka xitaa hadii aadan weli hirgalin qaabka aad wax u iibineysid
Bog kasameyso baraha bulshada
Kanaallada waaweyn ee baraha bulshada oo aad bog ka sameysato sida (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter) waxey kuu fududeynayaa inaad ganacsigaaga suuqgeysid mustaqbalka iyo inaad sii haysatid booskaas. Booqo knowem.com si aad u baartid boosaska magacaaga uga banaan baraha bulshada
Bilow dhaqdhaaqa dakhligaaga
Isku day inaad sida ugu dhaqsiyaha badan usoo xareysid dakhli. Waxaa markasta yar dakhliga ganacsigaaga marka uu bilowga yahay. Iska ilaali jahwareerka inaad sugto ilaa inta ay waxwalba ay kaamilmaan. Isku day inaad sii diyaariso foomamka aad kunturaadyo ama maalgelin ku heli kartid.
Kireyso goob aad ku shaqeysid
Ganacsi kasta oo aad rabtid, waxaa marka hore muhiim ah inaad heshid goob aad kugudan kartid ganacsigaaga, una xog badso sida laguugu heli karo, iyo sida ganacsigaaga loo soo gaari karo.
Dalbo kaararka ganacsiga
Marka aad bilowtahay waxaad sameyneysaa isku xir badan oo ganacsigaaga ku saabsan, sidaa darteed dalbo kaararka ganacsiga weliba in kuugu filan. Kaararkaan ma ahan kuwo qaali ah, kaararka waxey kaa caawinayaan inaad siiso ama aad isweydaarsataan ganacsiyada kale ee aad danta kaleedahay ama iyaga kaa leh, waana arin kor uqaadeysa sumcadda ganacsigaaga.
Bangi ka furo koonto ganacsi
Waxaa laga yaabaa inaad fududeysato inaad isticmaasho koontada aad sida shaqsiga ah uleedahay, hasa yeeshee mustaqbalka waxey kugu noqoneysaa arin madaxa kaa cunto marka ay timaado helitaanka xisaab dhab ah oo ganacsgaaga ah
Sameyso nidaam ama system aad wax ku xisaabisid
Mar hadii aad ganacsigaaga u sameysato koonto bangi, dooro system aad ku dejiso ama ku habeyso xiisaabaadka ganacsigaaga. Waxaa iska yar waxa ganacsigaaga fashilin karo marka laga soo taago buug keydinta ganacsiga oo liidata
Qoondee mas’uuliyadaha dadka aad la shirkowday
Hadii aah la shirkowday hal qof ama kabadan, waa muhiim inaad go’aan kagaartid sida loo kala leeyahay waajibaadka. Si fiican u qeex waajibaadka oo ku xus dukuminti qoraal ah. Isfaham waa ka dhex dhaca daneeyayaasha iyo maal geliya yaasha ganacsiga waxey horseedi kartaa ganacsiga inuu burburo
Hi to all, since I aam truly eager of reading this website’s plst to be updated regularly.
It consists of ffastidious information.